Boris Johnson oo markale ka digay weerar ay qorsheynayaan Ruushka – Bulsho News
Boris Johnson oo markale ka digay weerar ay qorsheynayaan Ruushka
Ra’iisal wasaaraha Britain, Boris Johnson, ayaa sheegay inay hayaan caddeymo muujinaya in Ruushka uu qorsheynayo “dagaalkii ugu weynaa ee Yurub ka dhaca tan iyo 1945-tii.”
Johnson oo la hadlay BBC ayaa sheegay in “astaamaha oo dhan ay muujinaya in qorshahaas uu hadda si ahaan dhaqangalay.”
Hogaamiyahan ayaa intaa raaciyay in xogta sirdoonka ay muujinayso in Ruushka uu billaabi rabo duullaan uu dhinac kasta uga go’doomin doono caasimadda Kyiv.
“Dadku waa in ay fahmaan khasaaraha bani’aadannimo ee ka dhalan karta duullaanka noocaas ah,” ayuu yiri Johnson.
Ra’iisal wasaaraha ayaa waraysiga bixiyay xilli uu ku sugnaa magaalada Munich, halkaas oo ay hogaamiyayaasha caalamka ku leeyihiin kulan sanadle ah oo looga hadlo ammaanka.
Qiyaastii ugu dambeysay ee uu shaaciyay Maraykanka ayaa tilmaamaysa in ciidan gaaraya 190,000 oo askari uu Ruushka geeyay xuduudda uu la wadaago Ukraine iyo weliba gudaha Belarus.
Hogaamiyayaasha reer Galbeedka ayaa maalmihii la soo dhaafay ka digayay in Ruushka uu duullaankiisa billaabi karo xilli kasta, balse xukuumadda Moscow ayaa beenisay inay weerar ku tahay dalkaas.
Waxaa si weyn indhaha loogu hayaa gobollada Donetsk iyo Luhansk ee ku yaalla bariga Ukraine balse sheegay inay ka go’een dalkaas. Tan iyo sanadkii 2014, waxaa deegaannadaas ku dagaallamayay ciidamada Ukraine iyo fallaago gooni u goosad ah oo gacan ka helaysa Ruushka.